osTicket: Nidaamka Tigidhada Furan ee Furan | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan ka soo shaqeeyay dhowr shirkadood oo waawayn oo ku yaal wadankayga Venezuela, labadaba, waaxda taageerada ayaa leh dhibaatooyin badan markay timaaddo maaraynta dhibaatooyinka farsamo ee isticmaalayaasha, waxaa lagu xaliyay isticmaalka teknoolojiyada kala duwan, laakiin wixii ka sarreeya iyadoo bilowga ah a Nidaamka Tigidhada Furan.
In kasta oo aanan khabiir ku ahayn dhinaca taageerada, haddana mararka qaarkood waxay ahayd inaan gacan badan ku rido aaggaas mid ka mid ah shirkadaha kor ku xusan, si la mid ah, waxaan fursad u helay inaan noqdo isticmaale GLPI oo aan doorto inaan hirgeliyo osTicket, midka aniga ila ah ayaa ugu fiican Nidaamka Tigidhada Furan.
Inuu doorto inuu hirgeliyo osTicket Shirkad ku taal aagga konteenarrada lagu keydiyo, waa inaan ku falanqeeyaa aalado kala duwan oo kuwa soo socdaa ka muuqdaan: RT (Codsiga Raadraaca), OTRS: Nidaamka Codsiga Tigidhada Furan, GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informático) y osTicket.
Waxaan la joogay kan dambe, badanaa maxaa yeelay waxay ii oggolaatay inaan otomatigga u diro tikidhada sida ay sheegtay waaxda mas'uulka ka ahayd xallinteeda (Sidan oo kale waxaan ku maareynaa taageerada dhammaan aagagga, ma ahan oo keliya aagga tikniyoolajiyadda). Si la mid ah, waxaan hubiyay inaysan jirin wax dib u shaqeyn ah, maxaa yeelay tigidh kasta waxaa qaadan kara oo keliya hal isticmaale.
Waxaa xusid mudan taas osTicket Waxay leedahay shaqooyinka lagama maarmaanka u ah maareynta taageerooyinka nooc kasta ha ahaadeene. Marka laga soo tago inay tahay il furan, waxay leedahay beel ballaadhan oo u oggolaanaysa inay bixiso waxyaabo ka sii fiican oo ka wanaagsan kuwa la tartamaya.
1 Waa maxay Nidaamka Tigidhada Furan ee Furan?
2 Waa maxay osTicket?
3 Tilmaamaha OsTicket
4 Sida loo rakibo osTicket
Waa maxay Nidaamka Tigidhada Furan ee Furan?
ka Nidaamka Tigidhada Furan ama waxa Isbaanishka loo yaqaan Furan Nidaamka Tigidhada Furan, Waa codsiyo bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan u maamulno shilalka iyo codsiyada adeegyada qaab abaabulan oo otomaatig ah.
Dhacdooyinka iyo codsiyada waxaa lagu helaa iyadoo lagu saleynayo tikidhada ay soo diraan isticmaaleyaasha, kuwaas oo lagu keydiyo loona gaarsiiyo siyaabo kala duwan howl wadeenka mas'uulka ka ah maamulkiisa. Qalabkan waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa Xarumaha Wicitaanka, Waaxda IT-ga, Xarunta Macluumaadka, Shirkadaha Telemarketing, iyo kuwo kale.
Waa maxay osTicket?
Waa agab kuu oggolaanaya inaad ku maamusho qaab hufan, fudud oo fudud, dhacdooyinka ay ku abuureen isticmaaleyaasha email ahaan, foomamka websaydhka iyo wicitaannada taleefanka
osTicket ewaxaa loo arkaa kuwa badan oo ugu fiican Nidaamka Tigidhada Furan maanta, maadaama ay leedahay astaamo iyo aalado badan oo ka badan nidaamyada tikidhada badankood ee suuqa.
Si la mid ah, rakibaadda 'osTicket' waa mid fudud oo adeegsigeedu ka sarreeyo xalka kale. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay API awood leh oo u oggolaanaya isku dhafka qalabka xalalka dhinac saddexaad.
Maareynta qawaaniinta ganacsiga iyadoo la adeegsanayo SLA
Waxay u oggolaaneysaa shaandheynta tikidhada sida waafaqsan waaxda ay u dhiganta xallinteeda.
Waxay ka caawineysaa aasaasida socodka shaqada iyadoo loo eegayo nooca tikidhada, sameynta jawaabaha otomatiga ah haddii loo baahdo.
Suurtagalnimada in lagu daro faylalka faylalka badan leh (sawirro, sawirro, maqal iyo muuqaalba) codsiyada kala duwan.
Waxaad ku qori kartaa tikidhada tikidhada ku saabsan dhammaan talaabooyinka laga qaaday mowduuca laga hadlayo.
Qabashada tikidhada emayl, shabakad, telefoon, fakis iyo API.
Meelaha khaaska ah ee tikidhada, kuwaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay codsadaan macluumaad sax ah.
Qoraal hodan ah HTML
Ka mid noqoshada Mawduucyada Caawinta si loo xalliyo dhacdooyinka iyada oo aan loo baahnayn tigidh, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa abuuritaanka qaybaha tikidhada.
Ka hortag wada-hawlgalayaal badan oo ka jawaabaya tigidh isla waqti isku mid ah.
U wareeji tigidhada udhaxeysa waaxyaha ama u xilsaar xubnaha kooxda si loo hubiyo in ay u maareeyaan shaqaalaha saxda ah.
Dhammaan codsiyada waxaa lagu xereeyaa khadka tooska ah. Isticmaaluhu wuu gali karaa isagoo adeegsanaya emaylka iyo Aqoonsiga tigidhada, in kasta oo aan diiwaangelin ama isticmaale looga baahnayn inuu soo diro tikidh.
Warbixinno dhammaystiran oo aragti ka bixinaya waxqabadka iyo waxqabadka kooxda taageerada.
Inbadan oo kale.
Sida loo rakibo osTicket
2da jeer ee aan ku rakibey osTicket waxaan raacay habka rasmiga ah ee ku jira keydkiisa, oo aan hoos ku tilmaamayo, aniga oo aan marka hore xusin Shuruudaha iyo kordhinta qaar ee lagu taliyay in la rakibo.
HTTP server ayaa socda, doorbidayaa Apache
Nooca PHP 5.4 ama ka sareeya, 5.6 ayaa lagu taliyay
kordhin mysqli ee PHP
Nooca xogta MySQL 5.0 ama ka sareeya
gd, gettext, imap, json, mbstring, iyo xml kordhinta PHP
Qeybta 'APC module' waa la shaqeysiiyay loona habeeyay PHP
Habka ugu fudud ee loo rakibo osTicket waa in la kaydiyo keydka dadweynaha, ka dibna laga abuuro galka boggeena internetka ugu dambeynna la geeyo arjiga. Sida lagu muujiyay waxyaabaha soo socda:
Waxaad markaa marin uheli kartaa oagina serverkaaga osticket si aad u rakibto oo aad uhesho arjiga, sida aad ubaahantahay. Waxa kale oo aad ka heli kartaa cusbooneysiin cusub oo aad geyn kartaa (galka aad ku xajisay kaydinta), adoo fulinaya amarrada soo socda
Codsiga sidoo kale waa la heli karaa si loogu rakibo aaladda caanka ah Softaculus
Waxaan aad ugu boorinayaa codsigan hadaad ubaahantahay inaad u maareyso dhacdooyinka sida ugu haboon, hubaal qalabkani wuxuu kugu caawin doonaa si deg deg ah oo fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » osTicket: Nidaamka Tigidhada Furan ee ugu Fiican
Luis reer magaal dijo
Miyaad u maleyneysaa inay tahay bedel wanaagsan oo leh faa'iidooyin la mid ah nidaamyada sida Remedy AR?
Ujawaab Luis Luis
Waa bedel fiican BMC Caawinta Caawinta Miiska, waxay leedahay astaamaha badankood ee Remedy AR ay u bixiso ujeedooyinkaas gaarka ah, laakiin wixii intaas ka sarreeya waa bilaash.
Maqaal aad u fiican iyo talo wanaagsan
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada
Salaamu caleykum, maxaa maqaal fiican!
Waxaan qabaa su’aal ah; Codsi noocee ah ayaa osTicket ku kabi kara in lagu qaado CMDB sida ku xusan khibradaada?
Uma baahnin baahida loo qabo in la hirgeliyo CMDB, kiiskeyga gaarka ah haddii aan u baahdo waxaan u maleynayaa inaan qaadan lahaa wadada degdegga ah oo aan isticmaali lahaa OTRS https://www.otrs.com/ taas oo horeyba ugu jirtay CMDB asal ahaan ... Hada, haddii ay dhacdo in lagu daro osticket, waxaan isticmaali lahaa api awood leh si aan ula qabsado Itop, taas oo ah mid furan oo awood leh CMDB, Itop si buuxda uma aqaan (tijaabada lambarada tijaabada), laakiin qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa u isticmaalay wax soo saar si yaab lehna uga hadlay.
Hadda waxaan la shaqeeyaa Itop, waxaan kugula talinayaa si indho la'aan ah maadaama ay si buuxda u dhameystiran tahay oo ay xitaa aad u xoogan tahay sababo la xiriira arrimaha maalinlaha ah, kama aanan si fiican uga faa'iideysan qalabka laakiin xaqiiqdii waxay ku siineysaa tiro badan oo xulashooyin ah waqti lagu fuliyo CMDB adag.
Ku jawaab kaido
Saaxiib aniga iyo su'aal ayaan haynaa, ma haysaa wax buug ama cajalad fiidiyoow ah ama wax aan u isticmaali karo qaabeynta 0 illaa 100 itop
Jawaab David Gruzzi
osticket waxay ubaahantahay wax ka badal koodh laakiin waxay ubaahantahay iyaga si ay ufuliyaan CMDB, sikastaba, adoo tixgalinaya in wadamada Latinka aysan sifiican ula socon heerarka xeeladaha qaarkood, adigu waad hirgalisaa wayna kafiicnaan doontaa OTRS ... tan tan Diseembar 2020 .. maadaama ay jiraan maqaallo badan oo aan caddayn sida kan oo kale halka ay kaliya ku sheegaan inay wanaagsan tahay inay fududahay laakiin aan lahayn wax kala sooc ah .. in tan la'aanteed aysan ahayn wax la yaab leh sida dhabta ah
Hagaag, weydiin, waxaa jira xoogaa qalab ama koodh ah oo la hirgaliyo, marka marka tigidhka loo qoondeeyo 1 xubin taageer ah, waxay si otomaatig ah emayl ugu diri doontaa qofka soo saaray tikitka, oo leh lambarka tigidhada iyo magaca qofka imaan doona. . Farxad ..
Dib u eegis wanaagsan, haa mudane, waad ku mahadsan tahay talladaada.
Maqaal wanaagsan, talo soo jeedin ah oo ku saabsan otomatiga tikidhada adoo adeegsanaya faylasha CSV?
Habeen wanaagsan! Sideen ku helaa ogeysiiska boostada kaliya waaxda u xilsaaran xalinta tigidhada oo aan u helin dhamaan wakiilada
Jawaab Alejandra González
Sawirka meeleynta Diego Villasis dijo
Maqaal wanaagsan iyo talooyin, waxaad kugula talin kartaa OSTicket sheegashooyinka aan ahayn IT, laakiin ganacsiga, sida sheegashada tayada wax soo saarka, sheegashada qaansheegadka, iwm.
Shaashadda sheegashooyinka miyaa lagu habeyn karaa goobahooda gaarka ah?
Ma haysaa App si aad uga shaqeyso taleefannada gacanta ee Android / IOS?
Fadlan raali noqo dhowr waxyaalood isla waqti isku mid ah, waxaan rajeynayaa inaan helo fikradahaaga saxda ah
Jawaab Diego Villasis
GLPI waa mid aad u dhameystiran, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dirto emayl, oo ay kugu xirmaan LDAP
Ku jawaab mvalenzuela
Osticket waa xulasho aad u wanaagsan taageerada macaamiisha, muddo dheer ayaan ku isticmaali jiray shirkaddii aan ka shaqeeyey. Taasi waa sababta aan ugu haysto liiska nidaamka tikidhada furan ee ugu isticmaalka badan. https://helpdeskpymes.com/herramientas-de-ticketing/
Ku jawaab sistematickets
Saaxiib sidee tahay, markaa barnaamijkan waxaad kaloo abuuri kartaa nidaam wax lagu kaydiyo ??? Sidee ayuu GLPI u sameeyaa ???
Jawaab Juan Carlos Herrera Blandon
Galab wanaagsan, Nuxur aad u wanaagsan, kaliya waxaan qabaa hal su'aal oo ku saabsan nidaamka hawlgalka oo aad kugula talinayso inaad rakibato OSticket
Ku jawaab Nohel Guardiola
haye, ma jiraa khabiir ku takhasusay osTicket halkan ama qof aad ku talinayso?
Ku jawaab alejandro diaz
LA-TALIYAHA ENGLER dijo
Olá Prezado, waxaan ahay shirkad la talin ah Engler, waxaan lashaqeeyaa iibinta guryaha lakabyada oo buuxa, waxaan kuhaynaa BARUERI, OSASCO, CARAPICUIBA, GUARULHOS IYO SÃO BERNARDO DO CAMPO, Qiimo aad ufiican iyo xaalado (Laga bilaabo 209,00) Aceita FGTS, Venha conhecer o qurxin (01 iyo 02 qol jiif) inta udhaxeysa xiriirka zap 11 98495-1050, si loo ogaado faahfaahinta loona booqdo ama loo qurxiyo att, (Engler Consultant)
Ku jawaab CONSULTORA ENGLER